Chiveve chemashiripiti chekukahadzika kusava nechokwadi mukati memunhu wemweya. Chirango upofu hwomweya.
Vol. 7 JULY, 1908. Nha. 4
DOUBT ishoko rinoshandiswa zvakanyanya pakati pevasina kudzidza uye pamwe neakadzidza. Asi vashoma pakati peavo vanoichengeta yakashanda zvakadaro vanomira kufunga uye nekutarisa mucherechedzo iro izwi rinomira pariri.
Kusava nechokwadi kunobva duo, maviri, mune izvo zvinosanganisirwa pfungwa yekudyidzana nezvechinhu chero chipi zvacho, uye kuwedzera zvisingaperi kuburikidza nezvinhu zvese. Sezvo kusahadzika kune chekuita nezvepfungwa mbiri, kana mbiri, inogara ichiperekedzwa nekusingaperi, nekuti yakakamurwa kana kumira pakati pezviviri. Pfungwa yezviviri dzinobva pane chinhu, iri mudzi wechimiro kana chinhu. Kudzvinyirira kwakazara mukati mavo, asi kunoratidzwa kuburikidza neunhu hwayo humwe-hukama. Hweka ndiko kutanga kwekuratidzwa kuburikidza nenyika dzese. Zvepamoyo zvinosimbira mune atomu yega yega. Hutano huri muzvinhu zviviri zvisingapatsanurike uye zvakapesana chikamu, chinhu.
Imwe yevanopikisa indissolubly inotonga imwe uye inodzorwa inotungamirwa neumwe. Pane imwe nguva imwe iri mukukwira uye imwezve. Kusava nechokwadi kunoperekedza zviviri izvi, zvichiita kuti chimwe nechimwe chinamire kune icho uye nekumberi kuti chigadzirwe nemumwe. Kusahadzika kunozivikanwa chete kwatiri kana kuri kwekushanda kwepfungwa, asi zano rekusahadzika riripo mumakesi ese ezvinyorwa, kubva pakutanga kwekuratidzwa kusvika kuzere uye kwakakwana kuwana kwezivo. Kusava nechokwadi kunoshanda kubudikidza nepasirose yakaratidzwa nyika; yakafanana musimboti, uye zvakasiyana zvichienderana neayo ndege yeichiita.
Kusava nechokwadi kune kwakatangira mukusaziva. Inoshanduka mudhigiri zvinoenderana nekukura kwechinhu icho chiripo. Mune munhu, kusahadzika ndiyo mamiriro akaoma epfungwa, umo pfungwa hadzingasarudze mukufarira imwe yenyaya mbiri kana zvinhu, kana kuvimba neimwe.
Kusava nechokwadi hachisi kubvunza nezvechimwe chinhu, kana iko kusatsvagorora nekuferefeta, kana maitiro ekufunga; kunyangwe ichiwanzofambidzana nekufunga, uye zvinobuda mukuferefeta uye kubvunza mune chimwe chinhu.
Kuhadzika kwakafanana negore rinoba pamusoro pepfungwa uye kuridzivirira kubva mukunyatsojeka, uye kubva pakugadzirisa chero dambudziko nezve izvo zvinonzwisisika. Kufanana negore, kusahadzika kunowedzera kana kuderera muhukuru nehuremu sekuti munhu anotadza kuita maererano nekunzwisisa kwake, kana kuzvivimba uye anoita nekuvimba. Asi kusahadzika mamiriro ezvinhu epfungwa anodiwa kuti munhu azive uye akunde pasati pakajeka kujekesa kwepfungwa kunogona kuwanikwa.
Yakabatana uye inoenderana nekusahadzika, semadzitateguru, vadzidzisi, shamwari, vana, uye vashandi vekusahadzika, ndeyekushushikana, kuzeza, kusashivirira, kusagadzikana, runyararo, kutsamwa, kutadza, kusatenda, kusatenda, kusatenda, kufungidzira, kufungira zvakaipa, kushungurudzika tsika, kusazvibata, kusava nebasa, kusava nechokwadi, uranda, usimbe, kusaziva, kutya, kuvhiringidzika uye kufa. Iyi ndeimwe yemamiriro ezvinhu kusava nechokwadi kunozivikanwa.
Kusava nechokwadi kwakadzika-kwakadzika mupfungwa, kuri mukuwirirana nebasa rimwe repfungwa: iro basa kana chimiro chendangariro chinozivikanwa nerima, kurara. Kusava nechokwadi ndechimwe chechinhu chakatsanangura maitiro ekuiswa kwemukati kwepfungwa kubva kune yekutanga yeiyo refu mutsetse wepfungwa. Kusahadzika kwave kuri chinhu chakakosha zviito zvevanhu, chave chimwe chezvikonzero zvikuru zvekutambura kwakawanda kune vanhu mugari wenhaka uye nemamiriro ezvinhu umo vanhu panguva ino vachinetseka. Kuhadzika ndeye nhasi chimwe chezvipingamupinyi pakufambira mberi nekusimudzirwa kwemurume.
Iko kusava nechokwadi kunotarisana nevanhu panguva imwe neimwe yehupenyu hwake hwezuva nezuva uye panguva dzakakosha dzehupenyu hwake zvese zvakaonekwa pamberi, muhupenyu hwapfuura mumamiriro akasiyana. Vanoita sezve nhasi kusava nechokwadi nekuti havana kukundwa nezuro. Vanosimuka-nhasi kungava kukanganisa munhu kufambira mberi kana kukurirwa nezivo kuburikidza nezviito. Denderedzwa kana nguva yekusahadzika inovapo inotsamira mukukura uye zera iro senge kutenderera kwekukahadzika kwakarova munhu anenge achizviona.
Kune marudzi mana kana makirasi ekusahadzika. Dzine hukama nezvenyama uye nenyika nhatu dziri mukati uye dzakatenderedza: kusahadzika kwemuviri, kusahadzika kwepfungwa, kusahadzika kwepfungwa uye kusava nechokwadi kwemweya. Izvi ndizvo zviratidzo zvemarudzi akasiyana evarume vatinosangana navo, uyezve nevarume vana vezodiac vanogadzira uye vane murume mumwe nemumwe. Varume vana ava vange vachitaurwa nezvazvo uye vanofananidzirwa muKunyorwa “Zodiac.” Maona "Izwi," Kurume, 1907 (Mufananidzo 30).
Kufunga kwepanyama kunoenderana nenyika yepanyama uye kune iyo muviri wenyama, mumiriri wayo (libra, ♎︎). Sezvo pfungwa dzinoshanda kuburikidza nemuviri wenyama inorwiswa nezvose zvinoitika zvepasirese zvepanyama zvine chekuita nechiitiko chemuviri wenyama mumuviri wepanyama. Zvekuti pfungwa dzinotanga kusahadzika kubva panguva yekutanga kuziva kwekuita kwayo mumuviri wenyama, uye kuburikidza nemuviri wayo wenyama inoziva yenyika yepanyama. Mhuka haina kukahadzika sezvinoita munhu wenyama. Mhuka inotanga kufamba ichangozvarwa, asi munhu haakwanisi kumira kana kutombo kukamba uye zvinoda mwedzi mirefu kana kunyange makore zvisati zvazvivimba nemakumbo uye nekuchengeta kuenzana kwemuviri kana ichifamba. Nyama yemunhu inounza pamwe neayo maitiro kubva kuvabereki vayo sezvinoita imbwa kana mhuru kubva kuvabereki vayo. Kana zvaive nekuda kwekuzvarwa nhaka chete mucheche anofanirwa kumanikidzwa kufamba nekutamba zvakatenderedza kunge mhuru kana mbwanana. Asi hazvigone. Izvi zvinokonzerwa nenyaya yekuti mhuka yemunhu inozviisa pasi pechisikwa nemhuka nemadzitateguru ayo, asi zvakare inoiswa kune imwe nhengo, pfungwa; uye iyo pfungwa ichangobva kuwanikwa, isina kuvimba nechiitiko zvazvino, haigoni kufamba; inokahadzika uye kutya kuti muviri wayo uchawa. Kana ikakandirwa mumvura kwenguva yekutanga, bhiza, kana katsi, kana imwe mhuka, inozomhanyira kumahombekombe, kunyangwe zvisiri zvemvura kuenda kumvura. Inogona kushambira kwekutanga kuedza. Asi murume akaiswa kwenguva yekutanga pakati mudumbu, anonyura, kunyangwe angave akadzidza dzidziso yekushambira asati aedza. Chinhu chekukahadzika chinokanganisa mhuka yemusikirwo yemuviri wemunhu uye inodzivirira kubva kushandisa simba rayo rechisikigo, uye kubva mukuisa mukufunga kwekushambira iyo iyo yaakadzidza. Chiito chechisikigo chemuviri wenyama chinowanzo tariswa nekusahadzika kunomuka mupfungwa. Uku kusahadzika kunotakurwa pamusoro mupfungwa kubva kune humwe hupenyu kuenda kune humwe, mune ino nyika yepanyama, kusvikira kusahadzika kwakundwa. Muviri wenyama unogadziriswa wepanyika, asi pfungwa haizi yemunyika ino; hazvisi zvisingazivikanwe kune izvi zvepanyika nemuviri wayo. Kusazivikanwa kwepfungwa nemuviri wayo kunobvumira chinhu chekusahadzika mupfungwa kuti chiwedzere chiitiko chayo uye kupindira nekutonga kwemuviri. Izvi zvinoshanda kune ese mamiriro ehupenyu uye kumamiriro uye zvinzvimbo zvinouya kumunhu nenhaka.
Zvishoma nezvishoma, pfungwa inozojaja kumuviri wayo wenyama uye inokwanisa kudzora mafambiro ayo zviri nyore uye nenyasha. Kana, mukukura kwenguva dzose kwemurume, mushure mekunge adzidza zvinhu zvepasirese zvakafanira kuti azivikanwe-seizvi, semuenzaniso, sekurovedza muviri uye kuranga kwemuviri, kuchengetedza kwazvinoita uye nekurarama kuburikidza nebhizinesi kana nyanzvi. chinzvimbo, tsika dzekudyidzana nenzvimbo yaanogara, uye zvinyorwa zvenguva-uye akajaira kuseenzesa kwakajairika zvekuti anga akunda kusahadzika kwake kwekutanga, uye kana akadzidza kuvimba nekuvimba nenzvimbo yacho, ipapo pfungwa dzakapfuura nhanho dzekutanga dzekusahadzika uye dzakatarisana nekusahadzika kunomuka pamusoro penyika dzisingazivikanwe.
Kana zvinhu kubva kune chero humambo dzehumambo hwepfungwa dzepamberi zvinopinda kana zvakadzikira kumanzwiro enyama, kusahadzika kunomuka mupfungwa yekuti kune nyika isingaonekwe, mukati nekukomberedza yeyenyama, nekuti iyo pfungwa yakagadziriswa pakuziva. muviri wenyama, uye unodzidziswa nekukoshwa kune wepanyama uye nezvinhu zvepasirese. Iyo inokahadzika kuti chiitiko chemuviri chinogona kuva nemavambo acho mune chisingaonekwe sosi. Iko kusava nechokwadi kwakabatana neasingaoneki astral kana psychic yenyika nezvishuvo zvavo uye mafomu. Mumiriri waro mumurume ndeye linga-sharira, kana fomu yemuviri (virgo-scorpio, ♍︎-♏︎), nemhuka yayo uye maitiro.
Uku ndiko kusahadzika uko murume aane chekuita nako nekupokana naye muhupenyu hwake hwezuva nezuva uye hwepamoyo. Heano matsime epamberi pechiitiko chemuviri. Heano masimba uye zvimiro zvinoenderana, kana izvo zviripo, zvinokonzeresa zviito zvemuviri uye zvekunzwa senge kutsamwa, kutya, godo, kuvenga, uye zvimwe zvinonzwa zvakadai sekunakidzwa uye kunzwa kwekufara kweupenzi. Heano mauto uye zvisungo zvinoshanda pane chinonaka chakagadziriswa psychic yemurume. Aya manzwiro uye manzwiro anoitika kuburikidza nemuviri wemuviri nemanzwiro azvo nenzira yemweya wepfungwa. Masimba aya haawonekwe kumunhu wenyama, asi zvinoonekera kune wepamoyo murume apo, nedzimwe tsika, kana nenzira ye "svikiro", kana kuburikidza nechirwere, murume wepfungwa akasunungurwa zvakakwana kana kuparadzaniswa kubva kumazimbe emuviri wepanyama kuti manzwiro ake akakosha kune octave pamusoro uye mukati meyepanyama nyika.
Zvese kusahadzika izvo zvakarova murume wepano pano zvinosangana nazvo uye kukurirwa, kunyangwe zvavakakundwa mumuviri wenyama. Ivo vanokundwa mune yepfungwa nyika uye yeastral fomu yemuviri chete kusvika kune iro iro iro vakasangana naro uye vakundwa munyama.
Mukati uye pamusoro pezvepanyama uye zvepfungwa zvepasi uye nevarume vavo ndiyo nyika yepfungwa nemweya wayo wepfungwa (pfungwa dzakafungwa, ♌︎-♐︎).
Iyi ndiyo nyika inogara zvikuru munhu uye, nekuda kwekudikanwa kwepfungwa kuti iite nemuviri wayo wepanyama, ndiyo nyika yaanopokana zvikuru nayo. Kubva mukushandiswa kwechinyakare kana kushungurudzwa kwemuviri, pfungwa dzakabatanidza kuvepo nehupenyu hwepanyama zvekuti yakanganwa chaicho uye pachayo sekwakasiyana nemutumbi wayo wemuviri. Pfungwa inozvizivisa mukufunga nemuviri wayo nehupenyu hwepanyama chete, uye kana iyo pfungwa ichidudzirwa kuti pfungwa nepfungwa zvakatosiyaniswa kubva mumuviri wenyama, kunyangwe zvakabatana nazvo, pfungwa dzinokahadzika uye inonzwa kuda kuramba chirevo chakadai.
Kusava nechokwadi uku kunowanikwa kazhinji pakati pevakadzidza kupfuura pakati pevasina kudzidza, nekuti murume wekudzidza anodzidziswa muzvinhu chete izvo zvinoshanda mupfungwa mune hukama hwenyama, uye iye anozvigutsa kufunga kwezvinhu uye izvo zvinhu hukama zvakadzama nezvenyama yepasirese isisinasiiwa kusiya mutsara wepfungwa dzake uye kuti akure kuva ndege yepamusoro. Iye murume akadzidza wakafanana nemuzambiringa, unonamatira kuchinhu chakasungirwa, uye chakabatana nacho. Kana muzambiringa ukaramba kuomerera, uchikwanisa kusiya midzi yawo, wozvikanda uye uchikura uchibva pavhu rakadzika revabereki, ungarega kuva muzambiringa. Kana murume akadzidza aigona kusunungurwa kubva kumaturu edzimwe pfungwa, uye nepfungwa dzake dzichigona kusvika mukati uye kukura kubva kune izvo mubereki zvinhu zvakakura kubva dzimwe pfungwa, saka, senge chirimwa, aisazofanira kukura pane kumwe kukura. uye kusungirwa kutevedzera kutsamira kwavo seyake, asi iye anenge ari munhu ari kukura uye ane kodzero yekusvikira kumusoro kwemhepo yakasununguka uye kugashira mwenje kubva kunhivi dzese.
Muzambiringa unonamira pachinhu chayo; haigone kuita neimwe nzira nekuti inongova muzambiringa-muti, kukura kwemakwenzi. Asi munhu anokwanisa kubvisa pfungwa yake kubva uye kukura kubva mukukura kwekudzidza nekuti iye munhu-chirimwa chakatangira pamweya chine basa rayo uye ramangwana rayo kukukura kubva muhumwari hushe hwezvisikwa uye mune inojekesa nzvimbo yeruzivo rwemweya. . Iye murume wekungodzidzira nekufamba-famba haakure kupfuura kudzidza kwake nekuda kwekukahadzika. Kukahadzika, uye kutya iyo iri mwana wekusava nechokwadi, inomushungurudza zvakanyanya paanotsamira pakudzidza. Kusava nechokwadi kunoita kuti azengire. Iye anzeza kwenguva refu; ipapo kutya kumubata uye kumusundidzira kuti adzokere musango yekudzidzira yaanoda kuti ave mugumo wemabasa ese epfungwa, kana zvikasadaro anoramba achinetseka kusvikira asina chokwadi nezvese, kusanganisira kudzidza uye kusava nechokwadi kwake.
Pfungwa iyo inozvifungisisa iyo sepfungwa inoita mukati mepfungwa dzenyika, iyo yakatosiyana nenyika yepanyama, inogara ichirwiswa nekusahadzika. Zvinetso zvinosangana nepfungwa-zvakadai sekuti: mutsauko uripo pakati pehukama hwaMwari nechisikigo, mabviro emunhu, basa muhupenyu, kuguma kwekupedzisira, ndeavo vakasangana nepfungwa dzese dzavanoedza kuita vakasununguka munyika yepfungwa.
Iko kusava nechokwadi pamusoro peyipi yeiyi mibvunzo, kana yerusununguko runobvira rwepfungwa kubva kumapfungwa, kune tsika yekuita rima chiono chepfungwa. Kana chiratidzo chendangariro chakasviba, pfungwa dzinorasikirwa nechivimbo muchiedza chayo. Pasina mwenje haigone kuona kana kugadzirisa matambudziko, kana kuona nzira yaro, uye saka inowira muminda inonakidza yekufunga iyo yayaive yajaira.
Asi pfungwa iyo ine chivimbo mukuita kwayo kwemahara inodzinga rima rekupokana. Inoona yavo yega yekuita kuburikidza nenyika yekufunga iyo yavakasika. Kuwana chivimbo uye nepfungwa kuona kwayo pachezvayo nepfungwa dzenyika, inoona kuti mafomu epasi rezvemweya anotemerwa nepfungwa dzenyika dzepfungwa, kuti kuvhiringidzika kwezvirango uye mhirizhonga yemanzwiro kuri nekuda kwekuvhiringidzika mifungo uye inopesana-inofamba nemafungu-ekufunga, kuti chikonzero chemasimba uye zvisikwa zvine chimiro semafomu munyika yepfungwa zvinogadzwa nepfungwa dzinogadzirwa nepfungwa. Kana izvi zvazoonekwa, kusahadzika kese pamusoro peizvo zvinokonzeresa manzwiro uye zvinonzwika zvabviswa, zviito zvemunhu zvinonyatsoonekwa uye zvikonzero zvavo zvinozivikanwa.
Iko kusava nechokwadi pamusoro penyika yemweya uye wemweya kune chekuita nechisingafi chinofema uye chinobata munhu wenyama kubudikidza nepfungwa yakadzika mumuviri. Semumiriri wenyika yepamweya, kuna Mwari, wePfungwa dzeVose, munhu wemweya ndiyo pfungwa yepamusoro yevanhu, humwe hwayo mune hwayo hwomweya (cancer-capricorn, ♋︎-♑︎). Iko kusahadzika kwakadai sekurwadzisa pfungwa yemweya ndeye: kuti irege kupfuurira mushure mekufa; kuti sezvo zvinhu zvese zvichapinda munyika yemweya nekuzvarwa uye nekubva kunze kwenyika kubudikidza nerufu, saizvozvo zvichaitika zvichibva kunze kwenyika uye zvorega kuvapo; kuti pfungwa dzingave dzichigadzirwa kana kuitirwa kubva kuhupenyu hwepanyama, pane kuve chiri chikonzero chehupenyu hwenyama. Kusava nebasa kwakakomba ndekwekuti, kunyangwe pfungwa dzichifanira kupfuurira mberi kwekufa, zvichapfuura munzvimbo inoenderana neiyo yehupenyu hwepasi, kuti hupenyu hwepasi pano mumiviri yenyama huchave hwapera zvachose uye kuti hahuzodzokera pasi hupenyu.
Pfungwa inokahadzika kuvapo kana kuvapo kwekuti kuvepo kwemweya wezivo mune izvo mazano ezvikamu zvese zvekuvapo, kubva pane izvo pfungwa zvinotora kwaakabva; kuti nyika ino inoramba iripo yezivo, nemafomu ayo asina kufa akakodzera, iri nekuda kwekuda kwepfungwa dzemunhu kwete kuti ndicho chirevo chechokwadi cheMweya. Chekupedzisira, pfungwa yemukati yakaverengeka inokahadzika kuti ndizvo zvimwechete nezvayo neMweya usingafi uye nePfungwa dzeVose. Kusava nechokwadi uku kwakanyanya kwakakomba, kuparadza uye kusviba kwevose, nekuti iko kunopatsanura pfungwa iyo isiri yemuviri uye iyo iri pasi pezvinoitika zveiyo mamiriro ekunze, kubva kumubereki wayo asingaperi uye asingafi.
Kusava nechokwadi chivi chemashura. Ichi chemashura zvivi zvekukahadzika kusava nechokwadi mukati memunhu wemweya. Chirango chekusava nechokwadi upofu pamweya uye kusakwanisa kuona chokwadi chemweya mune chero chinhu kunyange kana chakatariswa.
Iko kukonzera kusahadzika kwevakasiyana varume irima risina kuvharwa kwepfungwa. Kusvikira rima rakadzimwa kana kushandurwa nemwenje wepakati, munhu acharamba asina chokwadi uye acharamba ari mumamiriro ezvinhu aanozviwana maari. Iko kusava nechokwadi kwekusafa nekukura kunoiswa mundangariro dzemunhu neavo vaizotonga nekudzora hupenyu hwake nekudzora kwepfungwa. Kutya kunoitwa pamberi pendangariro uye kuita mapatya phantom ekukahadzika. Varume vanozvibvumidza pachavo kuve vakavezwa-nevacheche, kuti vachengetwe murima repfungwa uye kurohwa mukuzviisa pasi pemapatya ekusahadzika uye kutya. Izvi hazvishande chete kune huwandu hwevasina ruzivo, asiwo kune varume vekudzidza vane pfungwa dzakatungamirwa nekudzidziswa kwekutanga muzvimwe zvitoro, uye avo nekudaro vakatya kutya kuenda kunze kwemapururu avo uye kukahadzika kugona kwavo kukura kubva mavari.
Kusava nechokwadi kunounza kusahadzika. Iye murume anogara achikahadzika, ishungu kwaari uye ishiri kune vese vakamupoteredza. Kuenderera mberi kukahadzika kunoita munhu kuita bvudzi, kupukuta kushaya simba ndiani asingafungi kuita, achitya mhedzisiro yechiito chake. Kusava nechokwadi kunogona kushandura pfungwa inotsvaga nekutsvagisa ikava dambudzo, kunakidzwa kwayo kuita nharo uye bicker, kukanda rima pamusoro kana kushungurudza zvinotenda zveavo vaanosangana navo, nezvetariro kana chivimbo muhupenyu hwamangwana, uye, munzvimbo yekutenda uye tariro, kusiya kusagutsikana, kusagutsikana uye kusagadzikana. Kusava nechokwadi kunokanganisa kusagadzikana mupfungwa yemunhu asina kutendeka uye asina unyengeri uye anofungidzira vavariro dzevamwe, anowana mhosva pazvinhu zvese, anochera nekuzvidza uye anoedza kukanganisa zvese nekusahadzika kwakasimbiswa mundangariro yake.
Kusava nechokwadi ndiko kusingaperi uko kunokonzeresa pfungwa kuti ifambe pakati, uye kusambosarudzira, chimwe chinhu kana chimwe zvacho. Rima rakakandirwa pamusoro pepfungwa nekuda kweiyo oscillating pakati pematunhu maviri kana anopfuura uye kwete kugadzirisa kana kusarudza pane chero. Saka tinowana varume vakashungurudzika vasina kumbofunga nezve chero chinhu, kana, tarisiro, kana vafunga kusarudza, vanotadza kuita nekuda kwekukahadzika kana kutya kunomuka maererano nechisarudzo. Uku kusagadzikana kwepfungwa uye kuramba kuita kunoita kuti pfungwa dzisakwanisa kusarudza uye kuita, asi panzvimbo pezvo zvinokurudzira simbe nekusaziva uye zvinokanganisa nyonganiso.
Nekudaro, kune chinangwa chekusahadzika, chikamu icho chinofanira kutamba mukukudziridza kwemunhu. Kusava nechokwadi ndeimwe yevanotangisa vepfungwa kupinda munzvimbo dzekuvhenekera. Kusava nechokwadi chengetedza migwagwa yose yekuziva. Asi kusahadzika kunofanira kukundwa nepfungwa kana iyo pfungwa ichida kupfuura neyakagwinya mukati. Kusahadzika ndiye muchengeti wezivo izvo zvinodzivirira anotyisa uye asina kusimba-wepfungwa kubva kupfuura nzvimbo yake. Kusahadzika kunodzosera kumashure vacheche vepfungwa vangada kukura pasina kuedza, uye uve nehungwaru vasina ruzivo. Sezvo rima rakakosha pakukura kwemhuka nezvidyarwa, saizvozvo nerima rekusava nechokwadi rakakura kuti rikure.
Pfungwa yekusagadzikana iyo isina kudzidza kutonga kwakaringana kana kuita kwakarurama kunoratidzwa panguva dzinonetsa muhupenyu. Saizvozvo, semuenzaniso, kana munhu akamira achivhiringidzika, ngoro mbiri dzichiswedera kubva kune dzakatarisana. Iye anotanga anotarisa imwe nzira, uye imwe yacho, isina kusarudzika kuti ndeipi nzira yekutiza njodzi. Kufunga uku kwakapindwa nekupokana, zvinoita sekumanikidza kufa kwakashata kwekuita kwakashata, sekudaro munhu asina kumira mushe pamakumbo emabhiza.
Iye anorega kusarudza pakati pezvinzvimbo zviviri zvaakapihwa, nekuda kwekusahadzika kwesarudzo dzakachena, kazhinji kunoonekwa achisiya mukana wakanyanya kunaka kuenda. Mukana haumbofi wakamirira. Mukana unogara uripo kunyangwe uchingopfuura. Mukana kuzadza kwemikana. Iye munhu anokahadzika anochema mukana uchangobva, uye izvo zvaakarasikirwa nazvo, asi nguva yaakapedzerwa mukuchema kurasikirwa kwake nekupomera mumwe munhu, zvinomudzivirira kuti asaone mukana ipapo aripo, asi zvakare asingaonekwe kusvikira zvawo zvangoenda. Iko kuenderera mberi kusava nemusoro uye kutadza kuona mikana kunoita kuti munhu asava nechokwadi nekukwanisa kwake kusarudza kana kuita. Mumwe anoramba asina chokwadi nemifungo yake uye zviito zvinokonzeresa runyararo, kushushikana, uye kuora moyo, zvese izvi zvinopesana nekuvimba muchiito. Kuita nechivimbo kunotungamira ruoko rwakakanda bhora rakananga kumaki. Neruoko mukuita kwayo, nekufamba, nekutakura kwemuviri, nekuvhunduka kwemusoro, nekupenya kweziso, nekurira kwezwi, mamiriro epfungwa aanopokana kana iye anoita. nokuvimba kunogona kuoneka.
Kusava nechokwadi chinhu chakasviba uye chisingaperi nacho icho pfungwa inotambura nacho uye ndokuva chakasimba apo chinokunda icho. Zivo inouya kana kuti yakakura kuva sokusahadzika inokundwa, asi kukahadzika kunokundwa nezivo chete. Zvino isu tichakunda sei kusahadzika?
Kusava nechokwadi kunokurirwa nekusatya sarudzo inoteverwa nemaitiro ayo sarudzo inoratidza. Kuongororwa kwekuti ndeipi inonyanya kufarirwa yezvidzidzo zviviri kana zvinhu haisi yekuvimba kusaziva kwekuita, kana iko kusahadzika, kunyangwe kusava nechokwadi kunopinda uye kuchakunda apo pfungwa dzinoramba kusarudza mukufarira chero. Kusava nechokwadi hakufungi; zvinogara zvichikanganisa uye zvinodzivirira kusarudza. Kana munhu akakunda kusahadzika, maererano nesarudzo pakati pezvinhu zviviri, kana pakusarudza chero mubvunzo, anofanira, mushure mekunyatsoongorora mubvunzo, asarudza nekuita zvinoenderana, pasina kusahadzika kana kutya nezve mhedzisiro. Kana mumwe arikufunga uye kuita seasina ruzivo rwakakura chisarudzo chake uye chiito chingaratidza kuva chisina kunaka uye, zvakadaro, mune zvakadaro, zvinowanzoitika zvisiri izvo. Zvakadaro, iye anofanirwa kuramba achiongorora muchinyorwa chinotevera kana mubvunzo uye kusarudza uye kuita zvinoenderana nesarudzo yake, asingatyi. Iyi sarudzo uye matanho anofanirwa kutorwa mushure mekunyatso ongorora nezvekukanganisa kwakaitwa mune yekupedzisira sarudzo uye chiito. Kudzikira shure mukusajeka kwekuita mushure mekunge chiitiko cheumwe charatidza kuti chakashata, kunyangwe zvaidavirwa kunge zvirizvo panguva iyoyo, zvinodzosera pfungwa uye zvinodzivirira kukura. Mumwe anofanira kuziva chikanganiso chake, achizvibvuma uye akazvigadzirisa nekuenderera mberi nekuita. Kukanganisa kwake kunofanira kumubatsira nekumugonesa kuona kuburikidza nezvazvo.
Nekuenderera mberi kwesarudzo uye nekuita, kucherechedzwa kwekukanganisa kwemumwe uye kuedza nemoyo wose kubvuma uye kuzviruramisa, mumwe uchagadzirisa chakavanzika chekuita kwakarurama. Mumwe achadzidza kusarudza uye kuita uye agadzirise chakavanzika chekuita chakarurama nekutenda kwakasimba nekutenda kuti iye ari mune imwechete neiyo Universal Mind kana Mwari, kuburikidza nehunyanzvi hwake, munhu wepamusoro kana pfungwa dzedenga, uye kuti kuziva kwake chaiko kuva anobva kune iro bhuku uye achavhenekesa kufunga kwake. Kana munhu akafungisisa pamusoro peiyi kufunga, akaibata nguva zhinji mupfungwa, akafunga nazvo mupfungwa uye oita maererano nesarudzo, haazombodzidzi kutora nguva yekuita sarudzo nehungwaru uye kuita nekururamisa, uye nekutonga kwakanaka uye kungoita chiito chaanouya. munhaka yekuziva yakasarudzika nemwari wake mubereki, kana achinge achinge achinge awana chete.